I-Quick Turn Prototype - IPandawill Technology Co., Ltd
IPandawill iyaqonda ukuthi isikhathi sibucayi kakhulu uma ufuna ukuvumela uhlobo oluthile noma ukwakhiwa kweqoqo lama-PCB lokuvunywa komklamo. Siyazi futhi ukuthi kakhulu amaphrojekthi aqhutshwa ngesikhathi noma ngaphambi kwesikhathi, futhi imvamisa ukuphuthuma kwama-prototype batches kungokoqobo impela.
Umnyango wethu wezobunjiniyela we-CAM uzoqinisekisa ukuthi asikho isikhathi esilahlekile ekutholeni ukwakheka kwakho kwesibonelo ekwakhiweni nasekulethweni ngesikhathi. Singakhiqiza imidwebo elula ye-PTH elula emaceleni futhi emaceleni amabili ngamahora angama-24 ngamavolumu amancane namahora angama-72-96 wama-multilayer angafika kuzingqimba eziyi-8. Ngamabhodi aphuthumayo, Sicela usazise kusengaphambili ukuze siqiniseke ukuthi imininingwane iqhubeka ngomzuzu esithola ngayo imininingwane yakho. Futhi sizoqinisekisa ukuthi asikho isikhathi esilahlekile enqubeni yokukhiqiza.
Isigaba I-Quick Turn prototype Isikhathi Esijwayelekile Sokuhola (iqoqo elincane)
2 izingqimba 2 izinsuku Izinsuku ezi-5
4 izingqimba Izinsuku ezi-3 Izinsuku eziyi-6
Izingqimba 6 4 izinsuku Izinsuku eziyi-7
Izingqimba eziyi-8 Izinsuku ezi-5 Izinsuku eziyi-8
Izingqimba eziyi-10 Izinsuku eziyi-6 Izinsuku eziyi-10
Yonke idatha ilawulwa ukuze ukudlulela okulandelayo ekukhiqizeni ivolumu kuqinisekise ukuqhubeka okuphelele phakathi kwezinto nezinto zokwakha ezisetshenziselwa ukwamukela ama-prototypes kanye nenani lokukhiqizwa kwevolumu. AmaPandawill Circuits ayisinqumo esihle somsebenzi wakho wesibonelo futhi sizosiza ekwandiseni ukwakheka nokuhleleka kwama-prototypes akho ukufeza izindleko eziphansi kakhulu kumavolumu wakho wokukhiqiza avunyelwe.
Khuluma nePandawill futhi sizokusiza ngejubane lakho ukumaketha.